रोशनीको मुख थुनेर महरालाई जेल पठाउने फैसला ! — onlinedabali.com
रोशनीको मुख थुनेर महरालाई जेल पठाउने फैसला !
काठमाडौं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जबर्जस्ती करणी उद्योगको अभियोगमा जेल चलान गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि उनलाई जेल चलान गरिएको हो ।
आइतबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले महरालाई पर्पक्षाको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । यो आदेशपछि महरालाई सोमबारै डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ ।
महराको पक्षामा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिबक्ता रमण श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसीलगायत कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । उनीहरुले आरोप पुष्टी हुने आधार र प्रमाण नभेटिएको हुँदा महरालाई धरौटीमा रिहा गरेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर, अदालतले महरालाई लागेको आरोप होइन भन्न नसकिने भन्दै पुर्पक्षाको लागि जेल पठाउने आदेश दियो ।
महराको थुनछेक बहस चलिरहँदा पीडित भनिएकी रोशनी शाही पनि इजलासमा पुगेकी थिइन् । उनले महराले आफूलाई बलात्कार प्रयास नगरेको भन्दै कुरा राख्न माग गरेकी थिइन् । तर, न्यायाधीशले शाहीलाई कुरा राख्न अनुमति दिएन । आफूलाई कुरा राख्न नदिएपछि शाही फर्किएकी थिइन् ।
न्यायाधीशहरुले शाहीलाई कुरा राख्न नदिएपछि अदालत पुगेका महराका समर्थकहरुले पीडितको मुख थुनेर फैसला गरेको बताएका थिए । उनीहरुले पीडित भनिएकी शाहीले होइन भन्दाभन्दै जेल पठाउने फैसला पूर्वाग्रही भएको बताएका छन् ।
महराको पक्षमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरुले पनि पीडितको कुरा पनि सुन्नु पर्ने माग गरेका थिए ।